केटीएम २५० एड्भेञ्चर सार्वजनिक, कति पर्छ मूल्य ? – रुपान्तर
मुख्य पृष्ठअर्थ/बाणिज्यकेटीएम २५० एड्भेञ्चर सार्वजनिक, कति पर्छ मूल्य ?
काठमाडौं – केटीएम २५० एड्भेञ्चर भारतमा सार्वजनिक भएको छ । यो मोटरसाइकल केहि समय अगाडि भारतीय डिलर नेटवर्कमा देखिएको थियो ।
कम्पनीले इन्ट्री लेवल एड्भेञ्चर मोटरसाइकलको रुपमा यसलाई ल्याएको हो । यससँगै कम्पनीले आधिकारीक रुपमा नै बुकिङ समेत खोलेको छ । केटीएम २५० एड्भेञ्चरको मूल्य २ लाख ४८ हजार २५६ भारतीय रुपैयाँ तोकेको छ । यो मूल्य केटीएम ३९ एड्भेन्च भन्दा ५७ हजार भारतीय रुपैयाँले कम रहेको छ ।